Jobho Anopa Kutengeserana PaHADRON SA - Techip RELAY
Jobho Anopa Zvekutengeserana PaHADRON SA
HADRON SA ikambani yakasarudzika kusimudzira software ichishandisa matekinoroji akanaka uye matarenda akanaka ekugadzirisa matambudziko einjiniya software zvine hunyanzvi uye hunyanzvi. HADRON SA inopa mhinduro dzakagadzirirwa-software dzakagadzirirwa zvinetso zvemasangano eruzhinji uye akazvimirira. Iyi tsika inovimbisa kubudirira kwemapurojekiti edu, nekuti tinoshandura software yedu kune edu vatengi maitiro
Sechikamu chekuwedzera kwayo, HADRON SA iri kunyorera iyo mubatanidzwa muYaoundé:
Matatu (3) Commerce Yemukati
• Kukwanisa kutarisira uye kusangana nevatengi vatsva
• Kuita kutaurirana kwekutengeserana
Kugadzira uye chengetedza hukama hwezvokutengeserana
• Iva neruzivo rwechizvino nzira uye nzira dzekutengesa IT mhinduro
• Iva neunyanzvi hwekombuta uye ugone kushanda ne software yekutengesa uye mazano ekutengesa
• Iva nehunyanzvi hwekuteerera, kurongeka, uye kuomarara
• Iva nehunyanzvi hwekugadzira, kuda kuziva, uye simba
• Kugona kushanda wakazvimirira
Iva nehunyanzvi hwekudyidzana uye kutsungirira
• Yakaedzwa hunyanzvi hwekutengesa
• Iva mitauro miviri (French / English)
• Iva neBC + 3 Yezvekutengesa kana mune yekutengesa maitiro
• Iva nemaminitsi mashanu ezvehunyanzvi ruzivo mukutengeswa kweIT uye telecommunication mhinduro.
• Kuziva kwakanaka kwezve IT zvishandiso, software yekutanga.
Mutoro & Misheni:
Iye mutengesi anozivisa zvakananga kuna Dhairekitori Kubudirira Kwemutengi (DCS), kwaari waachaudza nezvezviitiko zvake. Misheni yayo ichave:
• Kuongorora kwezve vatengi zvinodiwa
• Sangano rekushanya kwevatengi kune ese maakaunzi. Iye mutengesi wekutengesa (SO) anopa hukama pakati pekambani nemutengi.
• Iko kurudziro yezvigadziriso zvepasi rese zvinoenderana nezvinodiwa zvinoratidzwa
• Kugadzirisa uye kutumira mhinduro zvinoenderana nemisi yekupedzisira, mhando uye mutengo.
• Kunyora zvinotengeswa zvinopa mukubatana nemamwe madhipatimendi ekambani.
• Iko kuvandudza kwe-pro-forma uye invoicing pamagumo epurojekiti nekubatana nemadhipatimendi akakodzera emakambani.
• Mhinduro kumatarenda inotarisirwa neDCS
• Kuongorora invoice uye kuunganidza zvikwereti muakaunzi pamwe nekubatana nemadhipatimendi ese akakosha eayo kambani.
• Chirevo chezviitwa zvaro zvakagadzirwa neinowanika IT maturusi.
Chero ani anoda kufarira chinzvimbo ichi anofanira kutumira faira ravo (CV + kukurudzira tsamba) pakero inotevera: alphonse.mvele@hadron.tech
Villa inononoka kusvika pakurova Leicester uye kusvika pamutambo wemuPremi Cup
Pepanhau 18am raNdira 28, 2020 - VIDEO